Tan iyo wixii ka danbeeyay markii ay ciidamada Jabuuti ee howlgalka midowgga Africa AMISOM iyo ciidamo si gaar ah loo tababaray oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan la wareegeen sugida amniga Baladw
Posted by baarlin xaji on 28/01/2013 Mas�uuliyiinta shirkada Oday Treval Agency ee magaalada Baladweyne oo ah shirkadii ugu horeysay oo si toos ah uga shaqo bilaawday garoonka diyaaradaha markii dib loo howl-galiyay, waxaa ay sheegeen in hadda dadka duulimaadkooda adeegsada ee ka baxa magaalada ay kordheen.
Tan iyo wixii ka danbeeyay markii ay ciidamada Jabuuti ee howlgalka midowgga Africa AMISOM iyo ciidamo si gaar ah loo tababaray oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan la wareegeen sugida amniga Baladweyne waxaa is badal muuqda ku yimid nabad-galyada magaalada, taasoo keentay in ay dib u shaqo galaan goobihii danta-guud ee mudada dheer aan shaqeyn.
Garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Baladweyne oo mudo dheer aan wax shaqo ah qaban ayaa hadda la oran karaa waa mid dib u shaqo bilaabay, kadib markii ay arintaa siweyn uga howlgaleen saraakiisha ciidamada Jabuuti iyo mas�uuliyiinta maamulka gobollka Hiiraan.
Marka laga soo tago dulimaadyada diyaaradaha rakaabka ah, waxaa labadii cisho ee la soo dhaafay garoonka si toos ah uga soo dagayay khaadka laga keeno magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo markiisii hore ka degi jiray degmada Guri-ceel ee gobollka Galguduud.
Ganacstada khaadka qaarkood ayaa sheegay in ay faa�iido weyn ku qabaan in dib u howl-galinta garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne, madaama markii hore ay ku qasbanaayeen in ay khaadka u doonaan degmada Guri-ceel oo ay diyaaraduhu ka dajin jireen.
��Shirkadaha duulimaadyada khaadka keena Soomaaliya, markii ay ku qanceen nabad-galyada ka jirta magaalada ayeey go�aansadeen in ay si toos ah uga soo dajiyaan khaadka magaalada Baladweyne,�� ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada khaadka.
Maamulka garoonka diyaaradaha Baladweyne ayaa sheegay in hadda ugu yaraan maalintii laga yaabo in ay garoonka soo caga-dhigtaan ilaa sadex diyaaradood, taasoo muujineysa in amniga garoonku yahay mid leysku haleyn karo.
Duulimaadyada hay�addaha samafalka ayaa iyaguna ka mid ah kuwa sida tooska ah u isticmaala garoonka diyaaradaha, kuwaasoo todobaadyadii aynu soo dhaafnay marar badan ku soo laabtay magaalada.
Amaanka garoonka waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidamada dowladda Jabuuti iyo kuwa maamulka gobolka oo soo dhaweyn wanaagsan u fidiya dadka ka dhoofaya iyo kuwa ka soo dega garoonka intaba.
Mas�uuliyiinta shirkada Oday Treval Agency ee magaalada Baladweyne oo ah shirkadii ugu horeysay oo si toos ah uga shaqo bilaawday garoonka diyaaradaha markii dib loo howl-galiyay, waxaa ay sheegeen in hadda dadka duulimaadkooda adeegsada ee ka baxa magaalada ay kordheen waxaana todobaadkiiba maalinta Talaadada ah sida ay sheegeen ka baxa magaalada dad ku gaaraya 60 ruux, halka tiro intaa ka badanna ay shirkadu ka soo qaado magaalada Muqdisho iyada oo si toos ah uga soo dajisa Baladweyne.
Dadka ku dhaqan magaalada ayaa dhinacooda siweyn u soo dhaweeyay dhaq dhaqaaqan uu bilaabay garoonka iyaga oo sheegay in uu wax badan sahli doono.